Kylian Mbappe oo beeniyay inuu weeraray Lionel Messi – Gool FM
Kylian Mbappe oo beeniyay inuu weeraray Lionel Messi
(PSG) 09 Dis 2018. Weeraryahanka reer France iyo kooxda Paris St Germain Kylian Mbappé ayaa si rasmi ah u beeniyay, kadib markii lagu eedeeyay inuu weerar ku qaaday kabtanka Barcelona ee Lionel Messi.
Kylian Mbappé ayaa ku soo qoray bartiisa rasmiga ah Twitter-ka, war uu ku xaqiijinayay inuusan sheegin wax hadal ah ee ku aadan Lionel Messi.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii uu Mbappé qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka, uu soo xigtay “Canal Sport France” kaasoo isna daabacay hadalada Mbappé wuxuuna tilmaamay inuu si xun kaga hadlay Lionel Messi.
Canal Sport France ayaa soo bandhigay erayada uu kaga hadlay Mbappé Lionel Messi waxaana ka mid ahaa:
“Lionel Messi waa ciyaaryahan aan caadi ahayn, lakiin waxaan qabaa haddii aan sii qabto shaqo adag in aan noqon doono kan ugu fiican aduunka mudada 3-da ama 4-ta sano ee soo aadan”.
Laakiin Mbappé ayaa dhankiisa kaga jawaab celiyay qoraal uu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka wuxuuna yiri:
“Anigu marnaba ma aanan dhihin erayadan, waan ixtiraamaa oo waan la dhacsanahay Lionel Messi”.
Chelsea Xalay kama adkaan lahayn Man City haddii uu ka maqnaan lahaa Kabtankooda...(Bal EEG tuu dhigay Cesar Azpilicueta )
Real Madrid oo ku adkaatay Gool Caato ah.....(Benzema oo ay si Xun uga Madoobeyd)+SAWIRRO